Zebra na-emepụta & Ndị na-ebubata ya - China Zebra Fabric Factory
2020 Style New Verman Blinds Fabric 3m Obosara N'ihi Office
Verman ákwà kpuru ìsì bụ ngwaahịa emelitere nke akwa ákwà ìsì Shangri-La. Ọ bụghị naanị na ọ na-ejigide mmetụta dị egwu nke mkpuchi nke ákwà mkpuchi Shangri-La, mana nwekwara ụdị ejiji dị mfe nke ndị na-ekpuchi venetian. Nchịkọta ihe eji emeghe ihe nke verman blind ákwà na-adaba adaba maka iwepu uzuzu kwa ụbọchị, ịda ala na ọrụ nhicha ndị ọzọ. Groupeve Verman ákwà mkpuchi bụ ezigbo nhọrọ maka ọrụ mkpuchi ụlọ gị. Uwe ahụ na-eji yarn pụrụ iche wee na-enweta ọgwụgwọ ọnọdụ okpomọkụ dị elu, nke na-adịgide adịgide ma ọ naghị ewepụ.
Silhouette blind blind bụ ngwaahịa emelitere nke akwa ákwà Shangri-La, ọ bụ nhọrọ iji chekwaa nzuzo ma jikwaa ọkụ. A na-egbochi agụba ahụ n'agbata ọkwa abụọ nke ihuenyo. Mgbe emeghere ndị ìsì ahụ, a pụrụ ịhụ ọmarịcha ịma mma site na ákwà ahụ, a na-ewepụkwa ọkụ na-abanye n'ime ụlọ ahụ ka ọ dị nro; mgbe emechiri ìsì, ị nwere ike hụ na nzuzo nke onwe gị mgbe ị na-egosipụta ọdịdị dị nro mara mma nke Shangri-La blind.
N'okwu, silhouette blinds fabric bụ nhọrọ kachasị mma maka ụlọ ọrụ kpuru ìsì ma ọ bụ ndị na-ere ahịa ahịa. Anyị nwere ike ịnye ihe nlele n'efu nke ákwà mkpuchi maka ndị ahịa anyị. Mpịakọta ọ bụla nke egwurugwu na-ekpuchi ákwà ga-agabiga ule dị mma tupu ebupu.
Durable Ladder Mezie Shangri-La Blinds Fabric 100% Blackout
Ubube teepu shangri-la blinds fabric bụ ngwaahịa emelitere nke akwa ákwà Shangri-La. Ọ bụghị naanị na ọ na-ejigide mmetụta dị egwu nke mkpuchi nke ákwà mkpuchi Shangri-La, mana nwekwara ụdị ejiji dị mfe nke ndị na-ekpuchi venetian. Groupeve Ladder teepu shangri-la blinds fabric nwere ike iwetara gị mmetụta nke ịdị nso na nso nso nke anụ ahụ, izu ike na obi ụtọ, nwekwara ike iwetara gị mmetụta nke ịnọ jụụ na ịnọ na paradaịs. Ọ na-ekewa ọkara oyuyo n'ọkwá teepu shangri-la ìsì ákwà na blackout ladder teepu shangri-la blind ákwà.
Ihe nke lader teepu shangri-la blind bụ 100% polyester. Anyị na-enye ihe nlele n'efu maka ndị ahịa niile, ị nwere ike ịlele ogo ma họrọ agba ozugbo tupu iwu. Ihe bụ ihe ọzọ, anyị akwa bụ ọgaranya na agba na-eso na-emekarị nke mba ejiji.
Nhazi oge a Verman Blinds Fabric 100% Polyester
Verman blind ákwà bụ a ohuru imewe na ijikọta ákwà ngebichi, window ihuenyo na venetian blind. Ọ nwere ọrụ nke shading na ịchọ mma nke ákwà mgbochi ahụ. A na-ejikwa ya n’ọfịs, n’ụlọ, na họtel, n’ụlọ mmepụta ihe na n’oge ndị ọzọ. Groupeve Verman akwa mkpuchi nwere ike iwetara gị mmetụta nke ịbịaru nso na okike, izu ike na obi ụtọ, nwekwara ike iwetara gị mmetụta nke ịnọ jụụ na ịnọ na paradaịs. Enwere ike kewaa ya na ọkara-oji oji verman blinds fabric and blackout verman blinds blackout fabric.
Ihe nke verman na-ekpuchi ákwà bụ 100% polyester. Anyị na-enye ihe nlele n'efu maka ndị ahịa niile, ị nwere ike ịlele ogo ma họrọ agba ozugbo tupu iwu. Ihe bụ ihe ọzọ, anyị akwa bụ ọgaranya na agba na-eso na-emekarị nke mba ejiji.
Ọhụrụ Ejiji Mara Mma silhouette Blinds Fabric 100% Blackout
Silhouette blind ákwà bụ a ika-ọhụrụ imewe na ijikọta ákwà ngebichi, window ihuenyo na venetian ìsì. Ọ nwere ọrụ nke shading na ịchọ mma nke ákwà mgbochi ahụ.
Ndozi na nhicha nke zebra blinds akwa dị ka n'okpuru:
3. Ihicha ihicha bụ iji nweta miri ihicha, biko jiri a agụụ Cleaner na ahịhịa isi jiri nwayọọ agụụ. I nwekwara ike iji draya ntutu (emeghị ka ọ dị ọkụ) iji kpochapụ ájá na windo windo.
Ngwurugwu anyị na-ekpuchi ákwà bụ nhọrọ kachasị mma maka ụlọ ọrụ mkpuchi ma ọ bụ ndị na-ere ahịa ahịa. Anyị nwere ike ịnye ihe nlele n'efu nke ákwà mkpuchi maka ndị ahịa anyị. Mpịakọta ọ bụla nke egwurugwu na-ekpuchi ákwà ga-agabiga ule dị mma tupu ebupu.
New Design N'ogbe Ladder Mezie Shangri-La Blinds Fabric Blackout
Ubube teepu shangri-la blinds fabric bụ ngwaahịa emelitere nke akwa ákwà Shangri-La, ọ bụ nhọrọ iji debe nzuzo na ịchịkwa ọkụ. Groupeve ladder teepu shangri-la blind ákwà nwere ike iwetara gị mmetụta nke infinitely nso okike, nọrọ jụụ ma nwee obi ụtọ, nwekwara ike-ewetara gị mmetụta nke ịnọ jụụ na ịbụ na paradaịs. Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka ụlọ gị maka ọrụ mkpuchi. Uwe ahụ na-eji yarn pụrụ iche wee na-enweta ọgwụgwọ ọnọdụ okpomọkụ dị elu, nke na-adịgide adịgide ma ọ naghị ewepụ.
The mpịakọta ogologo nke 30m, na mbukota bụ ike akwụkwọ tube kwa mpịakọta. Anyị na-enye ihe nlele n'efu maka ndị ahịa niile, ị nwere ike ịlele ogo ma họrọ agba ozugbo tupu iwu. Ihe bụ ihe ọzọ, anyị akwa bụ ọgaranya na agba na-eso na-emekarị nke mba ejiji.
Factory Price Verman Blinds Fabric Ọkara-Blackout
Verman blinds fabric bụ ngwaahịa emelitere nke akwa ákwà Shangri-La blind, ọ bụ ụdị ohuru nke jikọtara ákwà ngebichi, windo windo na ndị ọhụụ. Ọ nwere ọrụ nke shading na ịchọ mma nke ákwà mgbochi ahụ. A na-ejikwa ya n’ọfịs, n’ụlọ, na họtel, n’ụlọ mmepụta ihe na n’oge ndị ọzọ. Ọ bụ nhọrọ iji dobe nzuzo na ịchịkwa ọkụ.
Ihe nke verman na-ekpuchi ákwà bụ 100% polyester. The mpịakọta ogologo nke 30m, na mbukota bụ ike akwụkwọ tube kwa mpịakọta. Anyị na-enye ihe nlele n'efu maka ndị ahịa niile, ị nwere ike ịlele ogo ma họrọ agba ozugbo tupu iwu. Ihe bụ ihe ọzọ, anyị akwa bụ ọgaranya na agba na-eso na-emekarị nke mba ejiji.
High Quality Ladder Mezie Shangri-La Blinds Fabric 100% Polyester
Ubube teepu shangri-la blinds fabric bụ a ohuru-imewe na-agwakọta ákwà ihuenyo, window ihuenyo na venetian blind. Ọ nwere ọrụ nke shading na ịchọ mma nke ákwà mgbochi ahụ. A na-ejikwa ya n’ọfịs, n’ụlọ, na họtel, n’ụlọ mmepụta ihe na n’oge ndị ọzọ. Ọ bụ nhọrọ iji dobe nzuzo na ịchịkwa ọkụ. Mgbe emeghere ndị ìsì, enwere ike ịhụ ọmarịcha mma site na enyo, mgbe emechiri ìsì, ị nwere ike hụ na nzuzo gị.
Uwe ahụ na-eji yarn pụrụ iche wee na-enweta ọgwụgwọ ọnọdụ okpomọkụ dị elu, nke na-adịgide adịgide ma ọ naghị ewepụ. Na ihe nke ubube teepu shangri-la blinds fabric bụ 100% polyester. Anyị na-enye ihe nlele n'efu maka ndị ahịa niile, ị nwere ike ịlele ogo ma họrọ agba ozugbo tupu iwu. Ihe bụ ihe ọzọ, anyị akwa bụ ọgaranya na agba na-eso na-emekarị nke mba ejiji.
Verman ákwà kpuru ìsì bụ ngwaahịa emelitere nke Shangri-La blind, na-ejikọ ákwà ngebichi, windo windo na ndị ọhụụ. O nwere ọrụ nke shading na ịchọ mma nke ákwà mgbochi ahụ, nke na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ dị mma iji dobe nzuzo na ịchịkwa ọkụ. Groupeve verman blind blind nwere ike iwetara gị mmetụta nke ịbịaru nso na okike, izu ike na obi ụtọ, nwekwara ike iwetara gị mmetụta nke ịnọ jụụ na ịnọ na paradaịs.
Uwe ahụ na-eji yarn pụrụ iche wee na-enweta ọgwụgwọ ọnọdụ okpomọkụ dị elu, nke na-adịgide adịgide ma ọ naghị ewepụ. Ihe nke verman na-ekpuchi ákwà bụ 100% polyester. Anyị na-enye ihe nlele n'efu maka ndị ahịa niile, ị nwere ike ịlele ogo ma họrọ agba ozugbo tupu iwu. Ihe bụ ihe ọzọ, anyị akwa bụ ọgaranya na agba na-eso na-emekarị nke mba ejiji.
2020 Style New Triple Layer Fabric Semi-Blackout
Groupeve akwa okpukpu atọ dị iche iche dị iche iche na ederede mara mma. Ijikọ akwa dị n'agbata ọkwa abụọ nke akwa sheer nwere ike ime ka ime ụlọ ahụ dị nro. Tụgharịa agụba iji dozie ike ọkụ. Texturedị ihe eji eme ihe pụrụ iche nwere ike idobe agba ahụ ogologo oge. Ike shading. Enwere ike iji nhicha nke Ultrasonic mee ka akwa ndị ahụ dị ka ọhụụ.
Dabere na njirimara nke akwa akwa akwa okpukpu atọ, enwere ike kee ya n'ime akwa na-acha oji na akwa akwa akwa na akwa ojii. Ihe nke akwa akwa okpukpu atọ bụ 100% polyester. Groupeve nwere ihe karịrị afọ 16 iji mepụta akwa mara mma na nke na-enweghị atụ.
Ahaziri Ejiji Shangri-La Blind Fabric ọkara-Blackout
Shangri-La blind bụ ụdị ọhụụ ọhụụ na-ejikọ ákwà mgbochi eletrik, windo windo, ihe mkpuchi venetian na ihe mkpuchi mkpuchi. Shangri-La blinds na ahịa ga-atụle njirimara abụọ dị arọ: nghọta na looseness. Ihe doro anya na-egosipụtakarị na ọkpụrụkpụ, usoro na ihe nke yarn ahụ n'akụkụ akụkụ. Mgbe ekpughere Shangri-La dị elu nke doro anya, ọkụ nke na-abanye n'ime ụlọ ahụ bara ụba ma dị nro; mgbe emechiri ya, ọ nwekwara ike zoo nzuzo nke ọma. Ogo nke oghere na-apụtakarị gosipụtara na ogo nke polymerization nke ntupu na akụkụ siri ike nke yarn ahụ.
Ọdịdị dị elu nke Groupeve shangri-La na-ekpuchi ákwà nwere ike iguzogide ike dị ukwuu, ọ gaghị ewepụkwa nsị dị arọ karịa iji ya kwa ụbọchị. Na nchịkọta, mgbe ị na-ahọrọ akwa, biko attentionaa ntị na mma, naanị mgbe ahụ ka ị nwere ike ịhọrọ akwa shangri-la blinds nke na-enye afọ ojuju, dị mma, ma nwee ntụkwasị obi.
Shangri-La kpuru ìsì Fabric ọkara ọkara
Shangri-La blind bụ ụdị ọhụụ ọhụụ na-ejikọ ákwà mgbochi eletrik, windo windo, ihe mkpuchi venetian na ihe mkpuchi mkpuchi. Ndụ ọrụ nke Shangri-La blinds fabric bụ dịtụ ogologo, ọ na-eguzogide oke okpomọkụ na oyi dị ala n'ihi àgwà ya. Ihu ọma, nsogbu nke belata ọrụ ndụ n'ihi obere okpomọkụ anaghị eme na mpaghara nwere ogologo oge anwụ ma ọ bụ obere oge oyi. N'ụzọ dị otú a, a na-agbatịkwu ndụ ọrụ nke Shangri-La.
Ọ bụrụ na ime ụlọ dị oke mma, na mgbakwunye na ịda ada kwa ụbọchị na ihicha obere ájá na akwa ahụ, ọ nwere ike nweta isi ihe karịrị afọ 10.